Masiakampy-Miandrivazo : Mpamily fiara tsy nahatsiaro tena nodarohan’ny Zandary
lundi, 09 janvier 2017 17:32
Mpamily fiara mpitatitra iray no voalaza fa nodarohan’ny Zandary tany Masiakampy, Kaominina Anosimena, Distrikan’i Miandrivazo omaly alahady 08 Janoary 2017. Tsy nahatsiaro tena ranamana ka dia nentina novonjena tao amin’ny hopitaly Atsimo-Antsirabe io alin’ny Alahady io ihany.
Araka ny nambaran’ilay voadaroka rehefa afaka niresaka izy dia mpamily no asany ary simba ny fiara fampiasany ka niangavian’ny namany, izay mpiara-miasa aminy izy, mba hiara-dia amin'izy ireo ho any Miandrivazo hanatitra entana, satria mpitatitra mampitohy an’i Masiakampy-Miandrivazo izy ireo.
Vao hivoaka ny sakana nataon’ny Zandary izy ireo dia nilàn’ireo mpitadro filaminana vaniny, izay nambaran’izy ireo fa sady efa nisotro no mbola mivimbina tavoahangy ihany koa. Nitaky ny taratasin’ny fiara ireo mpitandro filaminana ary taorian’izay dia nitaky indray ny karatra familiana fiarakodian’ilay mpamily iray teo anoloana, izay tsy nitondra ny fiara akory ary fatatry ireo mpitandro filamaninana tsara ihany koa.
Rehefa tsy nisy tany aminy satria tsy nitondra izy dia notakian’izy ireo kara-panondro indray ary rehefa tsy nisy izany ihany koa dia nosamborin’izy ireo avy hatrany ary nentin’izy ireo tany amin’ny birao fiasany dia raikitra ny daroka ka teo no nitrangan’ny voina ary dia niafara tamin’ny tsy fahatsiarovan-tenany.
Nanomboka tamin’ny 8 ora sy sasany alina no tsy nahatsiaro tena ilay mpamily ka hatramin’ny 10 alina vao navela hoentina tany Miandrivazo saingy tsy afaka nandray ny tao satria voalaza fa efa tsy vitan’izy ireo izany ka dia taty Antsirabe vao voavonjy ilay mpamily, ary mbola manaraka fitsaboana hatreto.